Warshadda Aluminium Aluminium | Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Aluminium ee Shiinaha
Daaqada Aluminium & Taxanaha Albaabka
Aaladda aluminium ee warshadaha, oo sidoo kale loo yaqaan: sheyga aluminium aluminium warshad, astaanta aluminium ee warshadaha. Macluumaadka aluminium ee warshadaha waa shey aluminium ah oo leh aluminium sida qaybta ugu weyn. Aluminium aluminium ah ayaa lagu heli karaa qaabab kala duwan oo iskutallaab ah iyada oo loo marayo dhalaal kulul iyo xoqid. Si kastaba ha noqotee, saamiga alaabada lagu daray ayaa ka duwan, sidaa darteed guryaha farsamooyinka iyo meelaha lagu dalbado astaamaha aluminium ee warshadaha sidoo kale way ka duwan yihiin. Guud ahaan marka la hadlayo, astaamaha aluminium ee warshadaha waxaa loola jeedaa dhammaan astaamaha aluminium marka laga reebo kuwa loogu talagalay dhismaha albaabada iyo daaqadaha, darbiyada daahyada, qurxinta gudaha iyo dibedda iyo dhismayaasha dhismaha.
Gawaarida aluminium ee gawaarida
Kooxda cilmi baarista ee Huajian Aluminium waxay muujineysaa in qiyaastii 75% isticmaalka tamarta ay xiriir la leedahay miisaanka baabuurta ， yareynta miisaanka gaariga waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa isticmaalka shidaalka iyo qiiqa. Marka la barbardhigo birta, aluminium waxay leedahay faa'iidooyin muuqda.
Daahfurka muuqaalka aluminium darbiga
Daahyada iyo nidaamyada darbiga daaqada ayaa loo adeegsadaa baqshadaha dhismaha waxayna hubiyaan in maalinta ugu badnaan la qaadan karo gudaha gudaha, taas oo u abuureysa jawi nabdoon oo raaxo leh dadka degan dhismaha. Intaa waxaa dheer, darbiyada daahyada aluminiumku waa xulasho caan ah sababta oo ah qiimaha bilicsanaanta sare iyo fursadaha aan xadidnayn ee codsiyada dhismaha.
Wadashaqeynta istiraatiijiyadeed: Huajian Alumin ...
Faa'iidada Foomka Aluminium Shaqo